Yechipiri Yakabatana Chipatara cheHarbin Medical University - Shenzhen Doneax Science uye Technology CO., LTD
Iyo Yechipiri Yakabatana Chipatara cheHarbin Medical University
Chipatara cheChipiri Chakabatana cheHarbin Medical University, chakavambwa muna 1954, chakakura-chakazara chipatara Chekutanga-kirasi cheGiredhi 3. Inobatanidza kurapwa, kudzidzisa, kutsvagisa kwesainzi, kudzivirira, hutano uye kugadziridza.
Chipatara ichi chinosvika nzvimbo inosvika mazana mashanu ezviuru emamirimita uye inzvimbo yekuvakira ye530,000 mativi emamita. Iine dhipatimendi re1 rekurapa, 11 madhipatimendi ekurapa uye 4 "zvipatara zvepakati" -rheumatism chipatara, chirwere chemoyo, chirwere chechiso, chipatara uye chipatara cheshuga. Kune vashandi vanopfuura mazana mashanu nemazana mashanu vari muchipatara. Sezvo kechipiri Clinical Medical College yeHarbin Medical University, ine madhigirii matatu echiremba anopa mawanga ekutanga -level discipline, makumi maviri neshanu madhigirii ekupa nzvimbo dzechipiri -level chirango, uye makumi matatu neshanu echiremba uye madhigirii anopa nzvimbo dzechitatu -level chirango.
Muchipatara, pane 5,200 mativi emamirimita ezvivakwa zvekudzidzisa zvakazvimirira, 5,000 mativi emamita e "National Ongororo Yekudzidzisa Yekuratidzira Center" uye "National Virtual Simulation Ongororo Yekudzidzisa Yekudzidzisa", 22,000 mativi emamita e "kiriniki yekudzidzisa kuratidzira hwaro hwevazhinji vanoita", 14,000 mativi emamirimita epasi undergraduate dzimba uye 16,000 mativi metres edzimba akapedza kudzidza. Kubva chirongwa chegumi nemashanu chegore, mabhuku ekuronga emunyika gumi nemashanu uye mabhuku ekuteerera-ekuona akanyanya kugadziriswa nevanhu vanokodzera vepachipatara chedu, uye mabhuku gumi nemaviri akarongedzwa nevamwe vedu sevapepeti vehukama asi vamwe vamwe vatora chikamu mukugadzirisa mabhuku makumi mana nemanomwe. . Mumakore matatu apfuura, zvikamu makumi mashanu nezvishanu zvekudzidzisa pamusoro penzvimbo yedhipatimendi reguta zvakatenderwa, kusanganisira 1 CMB chirongwa; 19 mhedzisiro yekudzidzisa pamusoro peguta redhipatimendi level yakawanikwa; 94 mapepa ekudzidzisa emunyika akaburitswa. Inoshingairira kuita dzimwe nyika kuchinjana pamwe nekubatana, kuve nehukama hwakakura nemayunivhesiti makumi maviri nematanhatu uye zvikoro zvekurapa, kusanganisira iyo University yePittsburgh, iyo University yeMiami, uye University yeToronto muCanada, uye vakaita huwandu hwekudyidzana kwesainzi.